Banyere Anyị - Shinva Medical Instrument Co., Ltd.
Shinva Medical Instrument Co., Ltd. e guzobere na 1943 ma edepụtara ya na Shanghai Stock Exchange (600587) na Septemba 2002.
Ọ bụ a na-eduga anụ ahụ ike ụlọ ọrụ otu tụnyere sayensị nnyocha, mmepụta, ahịa, ọgwụ na ahụ ike na ọrụ na ahia lọjistik nke ọgwụ na ọgwụ na akụrụngwa.
Na mpaghara akụrụngwa ọgwụ, usoro ọrụ itoolu nwere usoro nhazi na teknụzụ zuru oke e guzobere, na-ekpuchi njikwa ọrịa, rediotherapy na imaging, akụrụngwa ịwa ahụ na orthopedics, injinịa ime ụlọ na akụrụngwa, akụrụngwa ezé na ihe oriri, in-vitro diagnostic reagents akụrụngwa, ihe ndị dị ndụ na ihe ndị na-eri nri, akụrụngwa dialysis na ihe oriri, nchebe gburugburu ebe obibi ahụike na mpaghara ndị ọzọ. Ka ọ dị ugbu a, ụdị ngwa ọrụ dị iche iche nke ọrịa na-ebute ọrịa so na ndị kachasị elu n'ụwa. R & D na mmepụta nke akụrụngwa ọgwụgwọ bụ nnukwu n'ọtụtụ, zuru ezu n'ọtụtụ, dị elu na ahịa ụlọ na-eduga n'ọkwa teknụzụ.
N'ime akụrụngwa ọgwụ, ọ nwere ụlọ ọrụ teknụzụ injinị anọ dị mkpa: bio-pharmaceuticals, infusion pụrụ iche, nkwado ọgwụ ọdịnala ndị China na nkwadebe siri ike. Ọ na-ejikọ nyocha na mmepe, n'ichepụta yana ire ahịa akụrụngwa. Na mgbakwunye na imepụta akụrụngwa ọgwụ, ọ na-enye atọ n'ime otu "teknụzụ ọgwụ, akụrụngwa ọgwụ na injinia ọgwụ" nwere ezigbo ọrụ. N'otu oge ahụ, ọ na-enye ọrụ ngwugwu niile maka owuwu ọgwụ ọgwụ, ọgwụ ndị na-akpata ọrịa na ụlọ ọrụ ọgwụ, ma na-edozi nchegbu niile maka ndị ahịa.
Na ngalaba nke ọrụ ahụike, Shinva anọgidewo na-emeziwanye asọmpi ya na aha ọma ya. Dabere na ọkachamara ulo oru mbo, ewu, ime ihe, ị nweta na ọrụ nyiwe, anyị ga-ewu a oge a na ụlọ ọgwụ otu na elu ọgwụ echiche, ọnwụ ihu sayensị nnyocha larịị, ika management yinye na organic mwekota nke ego.
Na ngalaba ahụike na azụmaahịa, Shinva na-aza ọfụma banyere usoro ahịa na mgbanwe ọhụụ ọ bụla, na-akwado ịsọ asọmpi nke ụlọ ọrụ na mmepe mmepe ahụike, ma na-ebuputa nyocha azụmaahịa na ọhụụ.